Laascaanood : Beelaha Bahararsame iyo Qayaad oo Bilaabay dhaqan gelinta Heshiiskii Nabadeed (Sawirro+Warbixin) | KALSHAALE
Laascaanood : Beelaha Bahararsame iyo Qayaad oo Bilaabay dhaqan gelinta Heshiiskii Nabadeed (Sawirro+Warbixin)
Oct 10, 2018 - 1 Aragtiyood
Laascaanood ( Kalshaale ) Waxaa maalintii shalay magaalada Laascaanood Heshiis Nabadeed ku gaadhay Beelo wada dhashay oo Colaadi ay ku dhexmartay Koonfurta Gobolka Sool, waxaana maanta Bilowday dhaqan gelinta Heshiiskaasi.
Kulankan oo ahaa kii ugu danbeeyey ee gudiga nabadaynta labada beelood ee Cabdi Garaad ( Qayaad ) iyo Maxamed Garaad ( Bahararsame ) ayaa waxaa ay labadan beelood keeneen kharashaadkii Duugta oo kala ahaa dhinac 7 Qof (7000 $) Dhinacna 14 Qof oo uu ku jirey ninkii Fitnada Bilaabey oo iyana ay keeneen (13,000 $ ) .
Kulankan ayaa Waxaa loo ballamay in inta hadhey oo ahaa in socdaa wacyi gelin ah lagu maro deegaanadii dhibaatadu ka dhacdey , sidoo kale , Waxaa xiga in mudo lix bilood lagu fuliyo go’aanadii Maxkamada Shareeco ee ay ku xukuntey labadan beelood .
MAXAA KAMID AHAA GO’AANADII NABADDA EE LA GAADHAY ?
Waxaan doonayaa inaan idin tusaaleeyo dadkaygoow kolay qabyaalad baa idinka xoog roone? Eeg somaliya markasta waxay jeceshahay iyadooaan xamar oo kaliya aan wada xukumin ? In hadana sool waxyeelo ka dhacdo oo la qaxo waana iga run ? Waa xasad naftooda ka ahaatay jawaab deg degana waxay ka helaan xagga eebe? Somaliya waxay jeceshayhay in jam som land degaanadeeda dagaal beeleedyo ka dhacaan sida sool sanaag awdal iyo guud ahaan jam somland mana fahansana shacabkaygu? In la kala jioto beelaha wiilka iyo abtigiiya ee dega galbeedka iyobariga jam somland iyo beesha dhexe gudaheeda indhaha fura oo wiilashiina ha dilina somaliyana jawaabta xagga eebay ka heshaa? Bal u fiirsada iskama hadlayee u fiirsada haday wax ku qaadanayaan